कुन प्रदेशमा कतिले लगाए कोभिड १९ विरुद्धको खोप? – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १८ गते २०:०३
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएको सात महिनामा नै एक करोड भन्दा बढी खोप लगाउन सरकार सफल भएको छ। सरकारले गत माघ १४ गतेबाट खोप लगाउन सुरु गरेको थियो।
नेपालमा पहिलोपटक संक्रमण देखिएको एक वर्षपछि नेपालमा खोप लगाइएको थियो। कम्तीमा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाइ खोप लगाएमा रोगको नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई छ।
मन्त्रालयले अहिलेकै दरमा संक्रमण बढे तेस्रो लहर असोज १५ देखि कात्तिक १५ गतेभित्र आउने सक्ने चेतावनी दिएको छ। सुरुमा ६५ वर्षभन्दा माथिका र स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा काम गर्ने सरसफाइकर्मी कोभिड–१९ विरुद्धको रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका काम गर्ने व्यक्तिबाट सुरु गरिएको खोप अहिले ५० वर्षमाथिका प्रायः सबैलाई दिइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो मात्रा १७.९ प्रतिशत अर्थात ५४ लाख २४ हजार ८३६ जनाले र पूर्ण मात्रा १५.४ प्रतिशत अर्थात ४६ लाख ६७ हजार ३२८ जनाले लगाएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले विभिन्न चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिने विद्यार्थी खोप लगाउन थालिएको छ । ‘हामी प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘खोप आएपछि फेरि प्राथमिकीकरण गरेर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने छौँ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म एक करोड ३२ लाख खोप आइसकेको छ। नेपालमा अहिले कोभिशिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एण्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनिका खोप लगाइएको छ।
सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका ७१.६ प्रतिशत अर्थात कूल दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी असोजसम्म लक्षित वर्गको ३३ प्रतिशत र चैत मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउनसक्ने जनाएको छ।
कोभ्याक्सबाट निःशुल्क रूपमा एक करोड १३ लाख मात्रा खोप प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ। यसैगरी भारतसहित चीन र भुटानबाट नेपालले अनुदानका ४६ लाख ३० हजार मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ। तीमध्ये भारतले १० लाख मात्रा कोभिशिल्ड, चीनले ३४ लाख मात्रा भेरोसेल र भुटानले दुई लाख ३० हजार एस्ट्राजेनिका खोप उपलब्ध गराएको छ।
सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर खोप लगाइने छ । मोडर्ना ४० लाख र फाइजर ६० लाख मात्रा ल्याइने छ । नेपालमा हालसम्म आठ लाख ४८ हजार २०४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै सात लाख भन्दा बढी संक्रमणमुक्त भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढीको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा निको हुने दर ९४ प्रतिशत छ।
नेपालमा जनसंख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयको भदौ १७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार भेरोसेल खोप सबैभन्दा धेरै नागरिकले लिएका छन् ।
भेरोसेल खोपको दुवै डोज लिनेको संख्या प्रदेश १ मा १ लाख ८२ हजार २ सय ४३ रहेको छ भने प्रदेश २ मा यो संख्या ८१ हजार ५ सय ५० मात्रै रहेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा भेरोसेल खोपको दुवै डोज लिनेको संख्या ११ लाख ४८ हजार १८७, गण्डकीमा १ लाख ९३ हजार २ सय ९७, लुम्बीनीमा ३ लाख ५४ हजार ४ सय ३१, कर्णालीमा ७८ हजार ५६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ५८ हजार ७०० रहेको छ।
नेपालमा हालसम्म २१ लाख ९६ हजार ९ सय ७० जनाले भेरोसेल खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
त्यस्तै कोभिसिल्ड खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेमा लगाउनेमा प्रदेश १ मा १ लाख ४८ हजार ८४ जना, प्रदेश २ मा ७८ हजार ८७८ जना, वाग्मती प्रदेशमा ४ लाख २२ हजार २ सय ७२ जना, गण्डकीमा १ लाख ४७ हजार ४ सय ९७ जना, लुम्बीनीमा २ लाख ५२ हजार ९ सय ७८ जना कर्णालीमा ६८ हजार ८५५ जना र सुदूरपश्चिममा १ लाख ५१ हजार ३७ जना रहेका छन् । कोभिसिल्ड खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या नेपालमा १२ लाख ६२ हजार ३ सय २८ पुगेको छ ।
त्यस्तै एक डोज मात्र लगाइने जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाउनेको संख्या प्रदेश १ मा १ लाख ९३ हजार ६ सय ४०, प्रदेश २ मा २ लाख २ लाख ७४ हजार ४२९, बागमतीमा ३ लाख ४५ हजार ३९, गण्डकीमा १ लाख ३ हजार २ सय ११, लुम्बिनीमा २ लाख ५३ हजार ५४८, कर्णालीमा ६७ हजार ८ सय ३३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ३३ हजार ३ सय ९४ छ। नेपालमा कुल १३ लाख ७१ हजार ९४ जनाले जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।